Phone ခေါ်ချင်လို့.. — MYSTERY ZILLION
Media Ring Talk ကနေ ဖုန်းခေါ်ချင်လို့..။
ဒါပေမယ့် ပုဂံက SIP connection ပိတ်ထားတယ်ဆိုလို့ .. အဲ့ဒါ ဘယ်လိုကျော်ခွပြီးသုံးရမလဲ..။ နည်းလမ်းလေးဘာလေးပြောကြပါဦးဗျာ
Use freedom and set up mediaring talk connection via sock5 ( 127.0.0.1 port 1080 ). Sometime you must wait to get your calling . Mrtalk limits concurrent free users and if u get call, your call last 10 minutes. But you can dial after call. Good luck !
အစ်ကို ပြောတဲ့အတိုင်း Your Freedom သုံးပြီး ၀င်ကြည့်ပြီးပြီ..။ ISA SERver 2004 နဲ့လည်း Port forward လုပ်ပြီး ၀င်ကြည့်ပြီးပြီ..။